In ka badan 50 qoys kana tegay gobolada dhexe oo gurmad loogu sameeyay Muqdisho – Balcad.com Teyteyleey
In ka badan 50-qoys oo isugu jira caruur, haween iyo rag da’ ah xaaladooduna aad u liidato ayaa lagu daadiyay bartamaha isgoyska Afarta Jardiino ee magaalada Muqdisho.
Qoysaskaan oo xaaladooda nololeed aad u liidato ayaa xalay loo sameeyay gurmad lagu samatabixinayo xaaladooda aadka u liidatay, kaddib markii shacabka ku dhaqan degmada Yaaqshiid iyo maamulkooda ay u sameeyeen dib u dejin.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) iyo madax ka tirsan maamulka gobolka ayaa booqday qoysaskaasi, iyagoona u geeyay joodariyaal iyo agab kale oo ay ku maareeyaan noloshooda.
“Qoysaskaan waxaa heysta duruufo dhinaca nolosha ah, iyagoo muddo afar bilood ah wadada ku soo jiray” ayuu yiri Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in qoysaska la dejinayo goobo ay u cayimeen guddiga gurmadka abaaraha.
Dhinaca kale ma aha markii ugu horeysay oo ay Muqdisho ku soo qulqulaan qoysas ka yimid gobolada dalka oo ay ku habsadeen abaaraha, iyadoo horay We’ve got the best endep prices on the modern market. You can buy your endep for 0.49 USD with us now! gurmad sidaan oo kale ah dadka Muqdisho ay u sameeyeen qoysas xaaladooda nololeed aad u liidato.